မေးထားသောသူများအားလုံးအတွက် ပိုက်ပိုက်မကုန်စေတဲ့ နည်းလမ်းများတင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ။ - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Mobile Tutorials မေးထားသောသူများအားလုံးအတွက် ပိုက်ပိုက်မကုန်စေတဲ့ နည်းလမ်းများတင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ။
မေးထားသောသူများအားလုံးအတွက် ပိုက်ပိုက်မကုန်စေတဲ့ နည်းလမ်းများတင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ။
Thiha Htike at 10:17:00 PM Mobile Tutorials,
ယခုပို့စ် ကျွန်တော့် ကိုဖုန်းဆက်ပြီးမေးမြန်းထားသော သူများအတွက် သီးသန့်ပေါ့နော်.. ဒါပေမဲ့ မသိသောသူတွေဖတ်နိုင်ပါတယ်.အားလုံးကိုစုစည်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါပြီ ..
ဖုန်းဆက်မေးမြန်းထားသောသူများ ထဲမှ မေ့ပြီး မတင်ပေးဖြစ်ခဲ့ရင်ပြန်လည်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်..ပြီးတော့ မအားတဲ့အခါ ၊လိုင်းမကောင်းလို့ဆိုရင်
ပို့စ်တွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတင်ပေးဖြစ်မယ်မဟုတ်ပါ နားလည်ပေးပါ..ယခုဒီပို့စ်ထဲမှ စာသား၊ပို့များသည် ဒီဆိုဒ်မှာရှိချင်ရှိပါလိမ့်မည် ၊ ဒီဆိုဒ်မှာရေးသော
ဘလော့ခ်ဂါတွေရေးရင်ရေးခဲ့ဖူးမယ် ၊ ဒါပေမဲ့နားလည်ပေးပါ ၊ယခုမှစတင် Media Device များကိုသုံးမဲ့ သူများအတွက် သူတို့မရှာဖွေတတ်လို့ တောင်းဆိုလို့တင်ပေးရတာ ဆရာ၊
ညီအကိုများနားလည်ပေးကြပါနော်..်ဖုန်းဆက်သူများလည်းအရင်ဆုံးကိုယ့်ဘာသာကိုယ်Try ကြည့်ပါအုံးဗျ ချက်ခြင်းမသိတာရှိမေးမည်ဆိုပဲလုပ်မနေပါနဲ့ ကျွန်တော်လည်းအလုပ်ကတစ်ဖက်မို့ပါ..
အချိူ့သောကိစွ များဟာ ကျွန်တော့် ပါးစပ်နဲ့ဖြေလို့ မရတဲ့ ပြသနာများကိုတော့ ပို့စ်တင်ပေးနေပါတယ် .. မိမိတို့ တင်လိုသော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ များကိုတော့ ကျွန်တော့်ကိုဖုန်းဆက်ပေါ့နော်
..စာသားတွေထဲမှာ ရယ်စရာလေးတွေပါတယ် အဲ့တာကတော့ပို့စ်တွေကရှည်တော့ ပျင်းမှာစိုး ဟာသပြဇာတ်ကို အလကား ခေါ်ထားတာ :P
iCloud Activation Lock ကို ကျော်နည်း
iCloud Activation Lock ကျော်နည်းလေးပါ
1. iDevice ကို WiFi နှင့်ချိပ်ဆက်ပြီး Activation နေရာထိ သွားပါ။
2.PC ၏ Web Browser မှနေ၍ DoulCi.net ကိုသွားပါ။
3. " ***.***.*.**.albert.apple.com " ပါသော IP address စာသားကို Copy ယူပါ။
4. C:\_Windows\_System32\_drivers\_etc\_hosts (Windows)
/private/etc/hosts (Mac) ထဲကိုသွားပါ။
5. hosts လိုခေါ်တဲ့ file ကို notepad နဲ့ဖွင့်ပါ။
အဆင့် (၃) အတွက် ရှာမတွေ့ပါက အောက်က IP address ကိုသုံးနှိင်ပါတယ်
6. 188.226.251.76 http://Albert.Apple.com/ ဟုထည့်ပါ။အောက်ကပုံအတိုင်းပါခင်ဗျာ ......
ပြီး ရင် Host ဖိုင်ကို save လုပ်ပေးရပါမယ် ..... Host ဖိုင်ကို မsave
တက်မပြင်တက်ဘူးဆို အောက်က Link မှာ ၀င်ကြည့်လိုရပါတယ်....
7. အားလုံးပြီးရင် ကွန်ပြူတာကို Restart ချပေးလိုက်ပါ......
8. iDevice ကို PC နှင့် ပြန်ချိပ်ဆက်ပါ......
9.iTunes မှ pop-up message တက်လာပါက 'Continue' ကို နှိပ်ပါ။
iCloud Activation Lock ကို ကျော်သွားနိုင်ပါပြီ..
Credit to all.........- See more at: http://www.mgchithmwe.com/2014/05/icloud-activation-lock.html#sthash.PL4GpBlH.dpuf
ဖုန်းကို လက်နဲ့ တောက်ပြီးဖွင့်ချင်သူများအတွက်
ကိုယ့် Phone ရဲ့ Power key ကို လုံးဝထိစရာမလိုပဲ Lock Screen ကို Double Touch နဲ့
All new flagship smartphone come withaplethora of new features along with upgraded hardware specs. Smartphone manufacturers try their best to introduce gimmicks to attractusers. Samsung brings improved air and motiongesture functionality with each new top model. To tackle the motion and gesture feature found on Samsung’s devices, HTC has also introduced its own Motion Launch Gesture functionality.
HTC introduced this feature in its latest flagship, the HTC One M8. As the very name says, the HTC One M8 Motion Launch Gesture feature lets you wake you phone from sleep and launch certain apps with finger motion gestures like double tap and swiping up, down, right and left.
Before you get too excited, please note that Knockr works only on device that have OLED displays. Actually, the app usesaspecial trick that involves turning the screen pixels to black to make it look like it is inastate of sleep. Thus, the screen can recognize touch input even when the screen if off. Since the trick can be played only only on screens that use OLED technology, Knockr supports only OLED devices.
If you Android device meets this requirement, you can enjoy Knockr. The app hasavery simple interface. After opening the app, you only need to assign apps toacertain touch gesture. The app currently supports6gestures that include double tap, long press, swipe up, down, left and right.
To save your device from accidental launch of apps by rub of your pocket, Knockr intelligently turns off itself when you put your phone into the pocket with its face down. We tested the app on several devices like the Samsung Galaxy S5 and Note3and worked likeacharm. If you want to have HTC One M8 Motion Launch Gesture feature on your device, Knockr is the app worth givingashot.
ဒါလေးကလက်ဆောင်ပေါ့ autopower on-off apk download
ဒါလေးက ထပ်ပြီးလက်ဆောင်ပေါ့ AutoScreen On/Off Apk လေး download
ဒီစာအုပ်ထဲမှာ Hacker ဆိုသာဘာလဲ ဆိုတဲ့ ကြောင်း
Programing အကြောင်း linux , malware , window password hacking
gmail နဲ့ Facebook ကို Hack တဲ့အကြောင်း Keyloager , Phishing နဲ့
Hack တဲ့အကြောင်း ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ် . .
ဒီစာအုပ်ရေးသားသူအား Credit ပေးပါတယ်
ထပ်တင်ပေးချင်သေးတယ်ဗျာ အချိန်မအားတာလေ... ကျန်သေးသောသူများနောက်တစ်ခါတင်ရင်တင်ပေးပါ့မယ်ဗျာ...